अनलाईन गेमको मोह, सुनौलो भविष्य जोखिममा
काठमाडौं - अनलाईन गेम बालबालिका र युवाहरुबिच लोकप्रिय बन्दै गईरहेको छ । त्यसैले स्रोतका अनुसार प्लेस्टोरमा अत्याधिक मात्रामा अनलाइन गेम नै डाउनलोड हुने गर्छन् ।
अनलाईन गेम अनलाइन मार्फत एकल वा सामुहिक रुपमा खेल्न सकिन्छ । यस्ता गेमहरुमा अत्याधिक झुमिरहदाँँ अन्य खेल जुवा तास तथा लागुपर्दाथको जस्तै लत लाग्ने नेपाल मेडिकल कलेजका मनोरोग बिशेषज्ञ प्रा. डा.प्रदिपमान सिंहले जानकारी दिए ।
लामो समयसम्म अनलाइन गेम खेलिरहने व्यक्तिलाई ‘अनलाइन गेमिङ डिसअडर’ को जोखिम रहने प्रा. डा. सिंहले बताए । उनका अनुसार ‘अनलाइन गेमिङ डिसअडर’ भएका मानिसहरु असामाजिक हुन सक्छन् । अत्याधिक अनलाइन गेम खेल्दा विस्तारै मानिसको स्वभाव तथा व्यवहारमा परिर्वतन आउँन सक्छ, र मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न गई आत्महत्याको प्रयास समेत गर्न सक्छन् ।
अनलाइन गेमको लत लागेर आत्महत्याको प्रयास गरेको खबरले केहि महिना अघि निकै चर्चा बटुलेको थियो । भारतको मध्येप्रदेशको एक युवकले अनलाइन गेम पब्जी खेल्ने क्रममा पानी भनेर एसिड पिएका थिए । उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो तर उनले उपचारका क्रममा पनि सो खेल खेलिरहेको समचारमा उल्लेख गरिएको थियो ।
अनलाइन गेमप्रति आर्कषित एक व्यक्तिसँग कुराकानि गर्दा गेम खेल्न थालेपछि भोक निन्द्रा अन्य कुरामा ध्यान नजाने गेम मात्र खेलिरहन मन लाग्ने बताए ।
प्रा.डा.सिंहका अनुसार अनलाइन गेममा लत लागेको व्यक्तिहरु अन्य क्रियाकलापमा बिकर्षित भई खेलप्रति मात्र आकर्षित हुने गर्दछन् । त्यसको प्रभाव उनिहरुको दैनिक क्रियाकलापमा पर्न जान्छ । अनलाइन गेम बालबालिका र किशोर किशोरीहरुले बढि खेल्ने भएकाले यसले शिक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । उनिहरु खेलको मोहमा झुमिरहदाँ उनिहरुको सुनौलो भविष्यमा समेत ह्रास आउन सक्ने उनले बताए ।
उनले भने 'अनलाइन खेलको मोहमा डुबिसकेपछि त्यसबाट छुटकारा पाउन निकै कठिन हुन्छ,'यसकोे लत लागेपछि दिमाखमा समस्या हुने, सम्झने शक्ति कमजोर हुदै जाने, अन्य कुरामा ध्यान नदिने, पारिवारिक वातावरणबाट टाढा रहने आफ्ना समस्याहरु भन्न नसक्ने, आखाँ जुधाएर कुरा गर्न असहज महशुस गर्छन् ।'
यसको लत छुटाउनका लागि यहि पद्धतिबाट उपचार गर्दा निको हुन्छ भन्न सकिदैन । यसको उपचारका लागि कम्युनिटी थेरापी, फ्यामिली थेरापी, बिह्यावियर थेरापी र मेडिसिनहरुका मार्फत उपचार गरिन्छ । तर अनलाइन गेमिङ डिसअडर भएका बिरामीको उपचारका लागि सुरुमा डिप्रेशनको उपचार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यो लतबाट छुटकार दिलाउनका लागि अन्य उपचारसगै अभिभाबकले बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । अभिभाबकले बच्चालाई अन्य कुरामा व्यस्त राखिदियो भने उपचारमा सहयोग पुग्छ ।
(नेपाल मेडिकल कलेजका मनोरोग बिशेषज्ञ प्रा.डा. प्रदिपमान सिंह सँगको कुराकानीमा आधारित )